ပြင်ပ hard drive မှ Windows key နံပါတ်စဉ်ကိုဖတ်ပါ
နေအိမ်/ညွှန်ကြားချက်/ပြင်ပ hard drive မှ Windows key ကိုဖတ်ပါ
Vangelis4 ။ ဧပြီလ 2016
မကြာသေးမီက ကျွန်ုပ်သည် ပြင်ပ hard drive တစ်ခုမှ Windows Original Key ကို လိုအပ်သည့် အခြေအနေသို့ ရောက်ခဲ့သည်။ ဟာ့ဒ်ဒရိုက်က ချို့ယွင်းချက်ရှိလို့ အဲဒါကို ဖွင့်လို့မရပါဘူး။ ဟာ့ဒ်ဒရိုက်အသစ်တစ်ခုကို ထည့်သွင်းပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်သည် Windows ကို ပြန်လည်ထည့်သွင်းခဲ့ရသည်။ ပြဿနာက နံပါတ်စဉ်ကို ဘယ်မှာမှ မရေးထားဘူး။ ယခုလည်း? ဒါနဲ့ ကျွန်တော် ဘယ်လို ရုန်းထွက်ရမလဲဆိုတဲ့ အဖြေကို ရှာခဲ့တယ်။ ပြင်ပ hard drive Windows key ကိုဖတ်နိုင်ပါတယ်။ ဤနေရာတွင် ဖြေရှင်းချက်ကို ကျွန်ုပ်တင်ပြလိုပါသည်။
Windows key နံပါတ်စဉ်ကိုဖတ်ပါ
အလုပ်တစ်ခုလုံးအတွက်၊ ပြင်ပ hard disk Windows မှအသိအမှတ်ပြုသည်။
ပြင်ပ hard drive ကိုအလုပ်လုပ်နေသောကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်ပါ။
ထို့နောက်အောက်ပါ tool လိုအပ်သည်။
မှော်ဂျယ်လီ Bean Keyfinder
Windows တွင် product key ကိုဖတ်နိုင်စေရန် key finder ကို admin အခွင့်အရေးဖြင့်စတင်ပါ။ (KeyFinder ပေါ်တွင်ညာဘက် mouse ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးရွေးပါ။စီမံခန့်ခွဲသူအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါ")
ထိပ်ဆုံးတွင်ကလစ်နှိပ်ပါ Tools များ ပြီးတော့ဆက်လုပ်ပါ အုံတင်ရန် ...
ယခုလမ်းကြောင်းမှ external hard drive သို့သွားပါ ဇ: ပြတင်းပေါက်
SanDisk Ultra Android microSDXC 64GB မှ 80 MB / sec အထိ Class 10 memory card + SD adapter FFP
စွမ်းရည် 128GB အထိ
KeyFinder သည်အခြားအရာများကိုလုပ်ဆောင်သည်။ ယခုအခါ Windows key ကိုဖတ်ပြီးပြသသည်။
နံပါတ်စဉ်ကိုဖတ်ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်၊ ဥပမာ B. မှတ်ပုံတင်မှတဆင့် ငါဒီနည်းကိုအလွယ်ဆုံးရှာတယ်။
Firefox sidebar အမှောင်နောက်ခံ
Windows 10 Recycle Bin ကိုလည်း File Explorer တွင်ပြသနိုင်သည်
ပုံများကို iPad သို့ကူးပါ
ဝဘ်ဆိုက်သတိပေးချက်များ Chrome, Firefox, Opera, Vivaldi, Edge တို့ကိုပိတ်ထားပါ
Firefox - extension များအတွက် keyboard shortcuts များကိုပိတ်ထားပါ
Internet Explorer စတင်စာမျက်နှာကို tab အသစ်တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ပါ
ကို select hard disk သော့ Windows ကို